ကဗျာ | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
Category Archives: ကဗျာ
June 26, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
အသားသည်တွေ၊ ငါးသည်တွေရဲ့ ရွှေခေတ်ကို ရောက်နေပေပြီပဲ။ ဟင်းရွက်သည်တွေကလည်း ခေါင်းမော့လို့။
တက်လာတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ကဗျာဆရာ ရင်မောမိတယ်။ နေ့တိုင်း ဈေးသွားနေရတဲ့ ကဗျာဆရာ့ကတော်ကတော့ နှလုံးရောဂါတောင် ရနေပြီလား မသိဘူး။
လစဉ် အသက်၀၀ မရှူနိုင်လွန်းလို့ တောကအမေ့ဆီ ပြန်ပြေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါက်နေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ကမပါနိုင်ပြန်တော့ ဒီလိုပဲ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ နေကြရတာပေါ့။ ဘ၀တွေဟာလည်း တက်ဈေးတွေထဲမှာ နစ်မွန်းလို့။
ကဗျာဆရာဟာ ဟိုတုန်းကတော့ ဒီလိုပဲ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။ ခုတော့ ဒီလို ကြွေးကြော်တာဟာ သူမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံသယ ဖြစ်နေသေးတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခါးသီးမှုတံတားငယ်၊ တံတားကြီးတွေကို နင်းလျှောက် ကျော်ဖြတ်သွားရင်း၊ တစ်နေ့မှာတော့ ကဗျာဆရာ့ဆီကို စာတစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ သိပ်ပြီး ရေးလေ့ရေးထမရှိတဲ့ တောက အမေရဲ့စာပေါ့။
ကဗျာဆရာလည်း အမေ့ကို လွမ်းစိတ်နဲ့ စာကို ဖတ်လိုက်တော့ မာကြောင်းသာကြောင်း၊ အမေလက်လှမ်းမီတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း စသဖြင့် ဒါတွေကို အလျင်ဖတ်ရတယ်။
အဲ၊ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်လည်း ဖတ်ရရော ကဗျာဆရာ တော်တော် အံ့သြသွားမိတယ်။ ဘာကို အံ့သြသလဲဆိုတော့ သူ့အမေရဲ့ ကတ်ကတ်သတ်သတ် အတွေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးကိုပေါ့။
ကြည့်လေ … ။
ဈေးတက်ရဲ့လားကွယ်” … တဲ့။
သဘာဝအလျောက် ရင်သားကြီးထွားအောင် လုပ်နည်း (၃) နည်း
June 21, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
သင်ဟာ ရင်သားသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အစားထိုးကုသရန်လည်း စိတ်ကူးမရှိပါက ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီနေ့စဉ် အလေ့အကျင့် (၃) ခုနဲ့ သင့်ရင်သားကို သဘာဝအလျောက် ကြီးထွားအောင် လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁။ ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးပါ
ကြီးမားကျစ်လစ်တဲ့ ရင်သားပိုင်ဆိုင်လိုပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို estrogen နဲ့ progesterone လို အမျိုးသမီးဟော်မုန်းများဖြင့် သဘာဝနည်းဖြင့် ဖြည့်စွမ်းပေးပါ။ အသား၊ ငါးနဲ့ ကြက်ဥစသော ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကြောင့် အရင်ထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ရင်သားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကွေနိုအာ (quinoa)၊ ပဲ၊ အခွံမာအစေ့၊ ဟင်းနုနွယ်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းတွေ စားဖြစ်အောင် စားပါ။
၂။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းမျိုး (estrogen) ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ စားပါ
သဘာဝအရ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများက အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ နေ့စဉ်အစားအသောက်စာရင်းထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း estrogen ပမာဏတိုးမြင့်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ နှမ်းကြတ်စေ့၊ နေကြာစေ့၊ ပဲပုပ်၊ ကြက်ဥနဲ့ ပဲတောင့်ရှည်ပဲမျိုးတွေမှာ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
၃။ သွေးလည်ပတ်မှုတိုးမြင့်ပေးတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးပါ
အသားရေလှပခြင်းနဲ့ အရေပြားအောက် အဆီဆဲလ် လျှော့နည်းစေခြင်းအပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်ခြင်းက သင့်ရင်သားကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ အပန်းဖြေမှုအပြင် ကြက်သွန်နီ၊ ချောကလက်အမည်း၊ ဂျင်း၊ ရှောက် သံပုရာမျိုးဝင်အသီး၊ အုတ်ဂျုံ၊ ထောပတ်သီးနဲ့ ဖရဲသီး/သခွားသီးတွေကို မကြာခဏ စားပေးပါက ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်။
June 19, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ကမ္ဘာမြေရဲ့ သင်ရိုးအဖြစ် ပြဌာန်းရပြီ ။
May 9, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
နူတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို ငေးတယ်ဒါပေမယ့် .. သနပ်ခါးမလေးတွေကို ရွေးတယ်
ဒါပေမယ့် .. ဆံကျစ်ကလေးတွေဆို ငြိတယ်
sexy လေးတွေကို တပ်မက်တယ်ဒါပေမယ့် .. အိနြေ္ဒရှင်လေးကိုပဲ လက်ထပ်တယ်
အတို အဟိုက်လေးတွေဆို မျက်ဝန်းမှာ ဝဲနေတယ်ဒါပေမယ့် .. ရင်ဖုံး လုံချည် လေးတွေပဲ ရင်တွင်းမှာ စွဲစေတယ်လရောင်အောက်က ချစ်သူဆို မက်မဆုံး ကြည်နူးတယ်ဒါပေမယ့် .. နေရောင်အောက်က ချစ်သူကိုပဲ တစ်သက်လုံး ရည်စူးတယ်
ဒါပေမယ့် စံပယ်တွေ လွယ်လွယ်ပွင့်ရင်
မင့် ဘယ်လောက်ပဲ ဖလန်းဖလန်း ထထ
မင်း … မပါဘူး !
April 27, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
မင်းကရူပ်တယ်ဆိုပြီး………..ရက်စက်မှာလားရည်းစားရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီး……..ထားခဲ့မှာလားချစ်ခဲ့ဘူးသူဆိုပြီး……………မယုံတော့မှာလားမင်းသဘောပါချစ်သောသူရာ…မင်းဆွဲချက်လို ငါကိုယ်တိုင်လည်းမှား ခဲ့ဖူးတော့ မင်းသဘောပေါ့………….. နုနယ်တဲ့…….. ကိုယ်အသည်းမှာတော့ကနာရ……..မြက်ပင်လေးလိုရင်ထဲမှာ………
နွမ်းလျှကာ………………….. ကြေကွဲရပါ ပေါ့ဒီအသည်းလေ မသေဆုံးခင် ပြောချင်ပါတယ် ချစ်သောသူရယ်…
ကိုယ်လိုလူကို မသနားရင်တောင်….. နုနယ်တဲ့ ကိုယ်အသည်းကို…………….
ချစ်ခွင့်ပေးပါ ……ချစ်သောသူရာ နားလည်းပေးပါ……..ချစ်သောသူရာစာနာသနားလှည့်ပါ..ချစ်သောသူရာ ကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့ဒီစာတမ်းကို………..
သနားစွာနဲ့ ချစ်ခွင့်ပေးပါ …………..
မင်း အချစ်တွေကိုမျှော်လင့်နေမှာ မင်းသိမှာပါ။
*** ငါသေသွားခဲ့ရင် ***
April 22, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
• ငါ့ကို ထွေးပွေ့ မထားပါနဲ့ ..
• ငါ ကြိုက်တတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ယူမလာပါနဲ့ ..
ငါ သုံးလို့ မရတော့လို့ပါ ..
• ငါ သိချင်ခဲ့တဲ့ အဖြေတွေ လာပြောဖို့
• ငါ့ ကို တောင်းပန်ဖို့ စကားမဆိုပါနဲ့တော့ ..
ခွင့်လွှတ်ဖို့ ပြန်နိုးမထ နိုင်တော့လို့ပါ ..
** အတူရှိနေချိန်လေးကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးကြပါ **
ပျော်ရွှင်သော ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ
( ကိကိ )
Photo credit : Line
ငါ့ ကိုယ် ငါ ပိုင်တယ် လို့
ခင်ဗျား က လူထုခေါင်းဆောင် လေ
ခင်ဗျား မျက်နှာကို Scan ဖတ်
အော် တန်ခူး တန်ခူး အတော်မြူးမဝတဲ့ လတန်ခူး နှစ်သစ်ကိုကူး
ခေတ်သစ် ထူးဖို့ အတော် အရေးမလှတဲ့ နွေတန်ခူး
အတာရေဖြန်း သဒ္ဓါဝေလှမ်းတဲ့ မောင့်မေဦး
နှစ်သစ်ရောက်မှ ခေတ်စနစ် ဟြေက် ဇစ်မြစ်ကိုဖောက်
ဆန်းသစ်မရောက်အောင် စောင့်ထိန်းကြကွဲ့ ခင်ပျိုဦး မျိုး
ဖြောက်ဖျက် အကျိုး မရောက်တဲ့ ဒီသင်္ကြန်မြူး လူညွှန့် ခူးလို့ လည်ဖို့ မထူးကွဲ့
ဒီနှစ်ကူး ခိုး ခိုက်ခိုက် မိုး မိုက်မိုက် ကြိုး ကြိုက်ကြိုက် ရိုး ရိုက်ရိုက်ပါ ဖိုး ဖိုက်ဖိုက် တိုး တိုက်တိုက် လို လိုက်လိုက် ဆို ဆိုက်ဆိုက်ကာ ငို ငိုက်ငိုက် ရော် ရမ်းရမ်း ဖော် ဖွဲဖွဲ တော် တွဲတွဲ နေ မော် မွဲမွဲ လို့
ယင်း ယားယား ဖျင်း ဖျားဖျား တွင်း တွားတွား မှ ဒု ဒုက္ခ ပုပ်ထုပ်မရမှ လုပ် လုပ်ဟ လို့မအော်နဲ
့ စုတ်စုတ်ပဲ့တဲ့ ဒင်းလိုလူ ဟဟားဟားလို့ ရယ် ဒင်းလိုလူ
ဟြေဖို့မတန်ဖူး သွား သွားစို့ကွယ်
ခြေလှမ်းများ ( နိုင်နိုင်းစနေ)
အနောက် နေ၀င်ရာဖက် ဦးတည်ချင်ကြတယ်။
တစ်ကွက် အရွေ့မှားရင် အစားခံရတယ်
ရှေ့နဲ့နောက် လွန်ဆွဲနေတဲ့ ဒီခြေလှမ်းတွေမှာ
မြတ်နိုးခြင်းရှိတယ်၊ စွန့်လွတ် သီးခံခြင်းတွေရှိတယ်
အကြိမ်ကြိမ် ခလုတ်တိုက် လဲပြိုခဲ့လည်း